Vono olona tany Ambilobe Nidoboka eny Tsiafahy í “Body Mena”
Milamindamin-dratsy ny ao Ambilobe taorian’ny savorovoro noho fikasana fitsaram-bahoaka noho ny fahatrarana an’i “Body Mena”.
Voarohirohy ho namono tamin’ny fomba feno habibiana an-dRazafimalala Brigitte 35 taona, nitondra vohoka 7 volana izy. Nidina ifotony nandamina ny raharaha ireo tompon’andraikitra voalohany amin’ny fitandroana ny filaminana, notarihin’ny minisitry ny filaminam-bahoaka Controleur Géneral de Police Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys sy ny Sekreteram-panjakana eo anivon'ny fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimaria, jeneraly Ravalomanana Richard. Taorian'ny savorovoro nisiana fahapotehana toy ny fahamaizana fiara 3 sy moto 1, fahapotehan’ny biraon’ny polisy, faharatrana polisy iray,… dia nanapa-kevitra ny fitondrana fa hakarina aty Antananarivo ilay nahavanon-doza ka hatao famotorana momba ny asa ratsy vitany. Navotsotra kosa ireo olona 22 nosamborina tamin’ny savorovoro. Nentina fiaramanidina ilay lehilahy ary efa tonga eto Antananarivo. Efa mpamono olona ary efa nakarina teto Antananarivo mihitsy fa afaka foana. Ny taona 2013 dia namono olona tany Nosy Be, ary voasazy saingy votsotra, ny 2017 tany Ambilobe, ny 2018 dia nanao fanolanana niampy vono olona, dia io tany Ambilobe io ny farany. Noho izay antony izay dia tsy nanaiky mihitsy ny vahoaka tany an-toerana ny amin’ny mbola hitazonana azy ao sy tsy hanolorana azy ny fitsarana. Sazy mifandraika amin’ny heloka vitany no miandry azy, ka izay no antony nitondrana azy. Tsy tokony hiahiahy ny vahoakan’Ambilobe, fa tsy maintsy hatolotra eo anivon’ny fitsarana izy, hoy ny minisitry ny filaminam-bahoaka Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys. Re fa efa vita ny fanadihadiana savaranonando, ka ny fitsarana indray no handray an-tanana ny raharaha. Raha ny vaovao farany omaly hariva, dia nadoboka vonjimaika any Tsiafahy I Body Mena miandry ny fitsarana azy.